Yini i-meteorite: izici, ukwakheka nezinhlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 01/09/2021 17:39 | Isayensi yezinkanyezi
Ama-meteorites abelokhu ebonakala kumabhayisikobho lapho ewela emhlabeni wethu. Kubuye kwaba nenkulumo enkulu ngokuqothulwa kwama-dinosaurs ngenxa yomthelela wesibhakabhaka emkhathini wethu. Kodwa-ke, kunabantu abaningi abangazi kahle yini i-meteorite ngobuchwepheshe nokuthi kusho ukuthini ukuba khona kwayo.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi i-meteorite iyini, izici zayo nezinhlobo zayo.
1 Yini i-meteorite
3 Ukwakhiwa kwe-meteorite
4 Izinhlobo zamameteorite
5 Umehluko ngama-asteroid
Incazelo yama-meteorite ingashiwo njengesiqeshana somzimba wasezulwini esiwela emhlabeni noma kunoma iyiphi enye inkanyezi. Lokhu kusho ukuthi umzimba onamadwala kufanele ukwazi ukufinyelela ebusweni benkanyezi ushiye ngemuva umkhondo wokukhanya okhanyayo esiwubiza ngokuthi yi-meteor.
Ngakho-ke, ama-meteorites awakwazi ukuwela kuphela emhlabeni, kepha futhi angafinyelela kunoma iyiphi enye inkanyezi: IMars, iVenus, ubuso benyanga, njll
Ngokuqondene nomhlaba, unomgoqo wawo wemvelo wokumelana nalesi simo: umkhathi. Lolu ungqimba lwegesi lungadala iningi lezinto eziphakathi kwamaplanethi ezifinyelela emkhathini ukubola ngaphambi kokuba zifike ngaphezulu.. Ama-meteorite amakhulu ahlukana abe yizicucu ezincane, ezinye zazo zingafinyelela phansi.
Lapho bedlula, bakhiqiza ama-meteor esiwakhulume ekuqaleni. Lapho lawa ma-fireballs eqhuma emkhathini, abizwa ngokuthi ama-fireballs. Ama-meteorite amaningi awatholakali noma amancane kakhulu lapho efika ngaphezulu. Noma kunjalo, ezinye zingatholwa ukuze kuqhutshekwe nophenyo nokuhlaziywa.
Ama-meteorite anokuma okungajwayelekile nokwakhiwa kwamakhemikhali ahlukahlukene. Ama-rock meteor alinganiselwa ukuthi amaningi kakhulu kunamameteor ensimbi noma ama-rock rock meteors (okungenani kuya ngomthelela emhlabeni). Njengama-comets, eziningi zazo ziqukethe izinto ezivela ekwakhekeni kwesistimu yelanga, engahlinzeka ngemininingwane ebalulekile yesayensi.
Ama-meteorite ngokuvamile ahluka ngosayizi ukusuka kumasentimitha ambalwa kuya kumamitha ambalwa, futhi ngokuvamile atholakala maphakathi nomgodi odalwe lapho ewa. Kungakho eziningi zazo zatholwa ngesikhathi sokucwaninga komhlaba okwenziwa amakhulu eminyaka noma izinkulungwane zeminyaka kamuva.
Kulinganiselwa ukuthi cishe ama-meteorite ayi-100 osayizi ezahlukahlukene nokwakhiwa kwawo angena ebusweni beplanethi yethu unyaka nonyaka, amanye amancane kakhulu kanti amanye angaphezu kwamitha elilodwa ububanzi. Iningi lezinto ezingena emkhathini azivikelekile ekuqhekekeni kokukhukhumala endleleni yazo eyehlayo, kepha ezinye izinto eziningi zingangena. Uma ufakazi abona umthelela wayo emhlabathini, kwakubizwa ngokuthi 'ukuwa', futhi uma kutholakala kamuva, kwakuthiwa 'ukutholakala'.
Kubhalisiwe futhi kwabhaliswa cishe Ukuwa okungu-1.050 nokutholwe okucishe kube ngama-31.000. Ama-meteorite anikezwa igama lendawo lapho atholakala khona noma abona ukuwa kwawo, imvamisa kulandelwa inhlanganisela yezinombolo nezincwadi zokubahlukanisa kwamanye ama-meteorite awela endaweni efanayo.
Ama-meteorites angavela emithonjeni eminingi. Ezinye ziyizinsalela ezivela ekwakhiweni (noma ekubhujisweni) kwezinto ezinkulu zezinkanyezi (njengama-satellite noma amaplanethi). Zingaba futhi izingcezu zama-asteroid, njenge lezo ezigcwele ibhande le-asteroid phakathi kwamaplanethi angaphakathi namaplanethi angaphandle wesimiso sethu sonozungezilanga.
Kwezinye izimo, bahlukana nenkanyezi enomsila, belahlekelwa izihlokwana ezincane lapho bevuka. Ngemuva kokuba neyodwa yale mvelaphi, zisantanta noma ziphonswe esikhaleni ngejubane elikhulu ngenxa yokuqhuma noma ezinye izinto ezifanayo.
Ngokuya ngomsuka, ukwakheka noma impilo ende ama-meteorite anayo, ahlukaniswa abe izinhlobo ezahlukahlukene. Ake sibone ukuthi yisiphi isigaba esibaluleke kakhulu ngokuya ngawo wonke la maparamitha:
AmaMeteorite Wokuqala: Lawa ma-meteorite abizwa nangokuthi ama-chondrites futhi avela ekwakhekeni kohlelo lwelanga. Ngakho-ke, ngeke zishintshe ngezinqubo ezahlukahlukene zokwakheka komhlaba futhi zihlale zingashintshi cishe iminyaka eyizigidigidi ezi-4.500.
I-chondrite yeCarbonaceous: Kukholakala ukuthi yiwona ama-chondrites aqhelelene kakhulu nelanga. Ekubunjweni kwayo singathola u-5% wekhabhoni namanzi angama-20% noma izinhlanganisela ezahlukahlukene zezinto eziphilayo.
Ama-chondrites ajwayelekile: Yizi-chondrites ezivame kakhulu ezifika eMhlabeni. Imvamisa zivela kuma-asteroid amancane, futhi i-iron ne-silicate kuyabonakala ekubunjweni kwazo.
Ama-chondrite enstatites: Aziziningi kakhulu, kepha ukwakheka kwazo kuphela okufana nokwakheka kokuqala kweplanethi yethu. Ngakho-ke, ososayensi bakholelwa ukuthi ukuhlanganiswa kwabo kuzoholela ekwakhekeni kweplanethi yethu.
Ama-meteorite ancibilikisiwe: lolu hlobo lwe-meteorite luwumphumela wokuhlanganiswa okuyingxenye noma okuphelele komzimba oyinhloko wemvelaphi yawo, futhi kwenziwa inqubo yokuguqula isimo ngaphakathi.
Ama-Achondrites: Bangamadwala angenalutho aqhamuka kwezinye izindikimba zasezulwini ezisohlelweni lwelanga. Ngalesi sizathu, igama labo lihlobene nemvelaphi yabo, yize iningi labo linemvelaphi enganqunyelwe.
I-Metallic: Ukwakheka kwayo kusekelwe ngaphezu kwezinsimbi ezingama-90%, futhi imvelaphi yayo iyisisekelo se-asteroid enkulu, ekhishwe kumthelela omkhulu.
I-Metalloros: Ukwakheka kwayo kulingana nensimbi ne-silicon. Zivela ngaphakathi kwe-asteroid enkulu.
Kwezinye izimo, amagama athi i-meteorite ne-asteroid asetshenziswa ngokungafani. Kodwa-ke, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele, kunokwehluka okuningi phakathi kwemiqondo emibili.
Ama-Asteroids Ziyizidalwa zasezulwini ezinamadwala ezizungeza ilanga neNeptune, kujwayele ukujikeleza phakathi kweMars neJupiter. I-meteorite iyinhlayiyana encane yale asteroid ekwazi ukubola emkhathini futhi ifinyelele ebusweni bomhlaba.
Ngokwesikhundla sabo ohlelweni lwonozungezilanga, uma bezungeza phakathi kukaMars noJupiter, bangahlukaniswa njengabebhande le-asteroid, uma bezungeza eduze komhlaba, bangahlukaniswa njenge-NEA noma i-asteroid, uma besendleleni kaJupiter. , kungokweTrojans, uma zitholakala ngaphandle kwelanga lomhlaba noma kuma-asteroid afanayo ku-orbit, ngoba athunjwa ngamandla adonsela phansi eMhlaba.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi iyini i-meteorite nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Yini i-meteorite